Anticancer ọgwụ - Shijiazhuang Yiling Hospital
The nnọchiteanya mgbochi cancer na nkà mmụta ọgwụ na-eduzi nnochianya ọrịa Ozizi
Omume Nrụpụta ọrụ
1.National Medical Insurance katalọgụ
3.The Program akwado site a Grant si New Drug Research Foundation of State Administration nke Traditional Chinese Medicine
The Unique Ntụziaka
Na ọdabara na akpụ ọrịa ka na-esonụ:
1.Improve àgwà nke ndụ gosiri na ndị dị otú ahụ tumourous mgbaàmà dị ka belata agụụ, ọgbụgbọ, vomiting na adịghị ike
2.Taking tupu mgbe Radiotherapy na-anara ọgwụ nwere ike ibelata n'akụkụ-mmetụta na mma ọgwụgwọ mmetụta.
3.Applicable na tupu mgbe akpụ ime ihe na ọgwụgwọ a na-agwọ ogbo Mma ọgụ, expedite mgbake na ogologo surrival
Belata Side-mmetụta Dịkwuo ọgwụ na radieshon mmetụta
Oghom Jeremaya mere pụtara na 26 ọrịa niile 308 na Yangzheng Xiaoji otu n'oge chọpụtara, na pụtara 9 ọrịa niile 104 na-achịkwa otu, nke site na ikpe ndị na-adịghị mkpa na ibuo ọgwụ, na emeghị imetụta ọgwụgwọ.
N'oge na-adakarị ikpe, na-enyocha ihe ngwá, gbasara akụrụ ọrụ, mmamịrị na feces eme ule na YZXJ otu, e nwere ihe ọ bụla doro anya dị iche na-achịkwa otu; ọnụego nke pụtara ọhụrụ abnormity bụ ala karịa ọnụego n'ịtụgharị norm, nke site na ikpe adịghị mkpa na ọgwụ.
Atụnyere abụọ dị iche iche, 55 mgbe ndị efficacious na 8 mgbe ndị inefficacious na YZXJ ìgwè, nrụpụta ọnụego bụ 87,3%, na 37 mgbe ndị efficacious na 23 mgbe ndị inefficacious na-achịkwa ìgwè, nrụpụta ọnụego bụ 61,5%; atụnyere abụọ groups'efficacy ọnụego, ihe dị iche doro anya, P <0,05.
YZXJ Capsule na Nchikota na interventional ọgwụ, na-emeso 123 akpa ume akpụ ọrịa na meta na mbubreyo n'ụzọ, ọgwụgwọ otu oro nrụpụta ọnụego karịrị ịchịkwa otu, P <0,05. The ikpe gosiri na Yangzheng Xiaoji Capsule nwere ọrụ nke inhibiting cancer, na synergistic edinam na aka na-anara ọgwụ; àgwà nke ndụ na YZXJ otu karịrị ịchịkwa otu, na oghom mmeghachi omume erughị akara otu. The ikpe gosiri na YZXJ Capsule pụrụ ibelata n'akụkụ-mmetụta na-amụba ọgụ ka ọgwụ dị ka mma.
Mma Tumourous Mgbaàmà Dịkwuo Quality nke ndụ
Mma Tumourous Mgbaàmà Dịkwuo Quality nke ndụ tụnyere ìgwè abụọ na 'nrụpụta na mgbaàmà, ọrụ n'usoro-nchikota ule, Z = -4,060, P <0,001, ihe dị iche nwere mgbakọ na mwepụ uru; YZXJ otu karịrị ịchịkwa otu.
The ọrịa bụ abdominal njuputa-na distention, anorexia, spiritlessness na adịghị ike, soreness na adịghị ike nke ukwu na ikpere, red mmamịrị na omume rụrụ stools, ahụ ọkụ na-egbu ya mgbu nke niile dị n'elu mgbaàmà ga-graded site ihe. Ire ahụ, ire uwe na usu-gụnyere ke mgbaàmà ibiere nakwa.
Atụnyere abụọ dị iche iche 'mgbaàmà tupu mgbe ọgwụgwọ, ọrụ Mann-Whitney ule, P> 0,05, abụọ iche iche di tụnyere; atụnyere D-uru nke abụọ dị iche iche, n'elu mgbaàmà 'P <0,05, ihe dị iche nwere mgbakọ na mwepụ uru; YZXJ otu karịrị ịchịkwa otu on rụọ ọrụ ndị n'elu-adakarị mgbaàmà.
Yangzheng Xiaoji Capsule ịrịba Obi Pain na Dịkwuo Physical Ike
Yangzheng Xiaoji Capsule ịrịba Obi Alimentary Canal Mmeghachi omume n'ihi ọgwụ Drugs
Ike Dịghịzi Function inhibit Tumourous Uto
Ndidi Mr. YU, nwoke, 62 afọ
Aug 15 nke, 2005, dị otú ahụ na ihe mgbaàmà dị ka ụkwara elu phlegm na ọbara, mmegbu na obi na emaciation, site CT ule ihe A ozo na-atọ ọkwa ọgwụ chọpụtara mgbaàmà dị ka nri-ọrịa cancer akpa ume (pathologic nchoputa bụ adenocarcinoma). Ebe ọ bụ na nri pleural effusion, ọrụ adịghị, na mmekọahụ gwara ndị na lanarị ga-abụ nanị ọtụtụ ọnwa. Enweghị chemo na radio ọgwụgwọ ọgwụ ọjọọ eme ihe, na-ewere Yangzheng Xiaoji Capsule, 4 capsules kwa oge, 3 ugboro kwa ụbọchị, Nov 14 nke, 2005 (84 ụbọchị 'ọgwụgwọ), ndị agụụ na ibu ụba na nkịtị ike na-enwekwukwa; CT re-ule: ngwọta shrunk ruo n'ókè ụfọdụ na nri pleural effusion kpamkpam etinye obi gị dum.
Sep 15 nke, 2006 (13-ọnwa 'ọgwụgwọ), ọrịa agụụ, arọ na nkịtị ike amụbawo, na nta na-arụ ọrụ bụ dị. Apr 15 nke, 2007, ndị agụụ bụ nkịtị, ibu nweela na-eme kwa ụbọchị natara ka norm; CT re-ule: e nweghị doro anya dị iche.
【Ihu Nke】 License of State Drug Administration Z20040095
【Main Efrata】 mgbọrọgwụ Astragali, Fructus Ligustri Lucidi, mgbọrọgwụ Ginseng, akụkọ Ero, Rhizoma Curcuma Phaeocaulis, Rhizoma Atractylodis Macrocephalae (Ịkpali-frying), Herba Hedyotidis Diffusae etc
【egosi】 ime ọgụ na inhibiting akpụ
【Clinical Ngwa】 Inweta n'ihu ime ihe nwere ike dịkwuo ọma ọnụego nke ọrụ. Expedite mgbake, ibelata metastasis na gbochie si nlọghachi azụ mgbe ọrụ Eme nrụpụta ọrụ nke Radiotherapy na iji ọgwụ, ibelata na-anara ọgwụ onunu ogwu, ma belata n'akụkụ-mmetụta. Mma agụụ na àgwà nke ndụ ma nweta ibu ka palliative ọgwụ.
【Administration & Ọnụọgụ ọgwụ】 Were ọnụ, 4 capsules oge ọ bụla na ugboro 3 a ụbọchị
【nkọwapụta】 0,39 g / Capsule
【ngwugwu】 Aluminium-plastic ngwugwu 36 capsules / igbe, 400 igbe / katọn